OKUSHA!!! I-STUDIO APARTMENT 15th Floor
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Humberto
I-Loft esitezi se-15 ene-balcony izintaba zeSierra de Santa Marta. Itholakala ePlaya Salguero, indawo enhle, ezolile; Imizuzu engu-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza kanye nedolobha ukuze ukwazi ukuthola zonke izintelezi iPearl of America okufanele ikunikeze. Ngaphakathi kweKlabhu yasebhishi ewubukhazikhazi enokufinyelela okuyimfihlo olwandle, amachibi, ama-jacuzzi, indawo yokucima ukoma, indawo yokudlela enenkonzo yasekamelweni kanye nezindawo zokungcebeleka zabantu abadala nezingane. Ngesikhathi sokufika, iklabhu ikhokhisa u-30.000 COP isivakashi ngasinye ngesongo esihlukile.
Leli fulethi elizimele linazo zonke izinsiza zehhotela. Umthamo wabantu abangu-4 kumbhede wosayizi wendlovukazi kanye nombhede we-divan eyodwa one-draut trundle egumbini lokuhlala. Igumbi lokugezela, ikhishi elihlonyiswe ngokuphelele kanye ne-balcony. 40'' TV, WiFi , umshini wokuwasha kanye nesiphephetha-moya.
4.85 ·114 okushiwo abanye
4.85 · 114 okushiwo abanye
Itholakala e-Playa Salguero, abaphathi be-Beach Club babuyisele ihlathi elihle lomhlume osebeni lomfula i-Gaira. Indawo inokuthula, iphephile kanye nemizuzu emi-5 (ngetekisi) ukusuka e-El Rodadero lapho ungathola khona izitolo nezinye izinsiza.
Umphathi wethu ongu-Lucy uzobingelela futhi atholakale ukuze akusize nganoma yiluphi ulwazi noma usizo oludingekayo.
Inombolo yepholisi: 72717